Zonke freaks fitness abaxhomekeke iindlela ezahlukeneyo ngokuhlala fit bayazi ukubaluleka yoga kakuhle kakhulu. Yoga konke malunga ukuma akho, kunokuba yoga asanas ukuba ngqo ngakumbi. Ukuba ufuna ukufikelela ekwiqondo eliphezulu yoga, kufuneka uqinisekise ukuba indlela yokuma yakho ilungile. Ukuze ufumane ukuma ekunene kwaye ukuqinisekisa ukuba umva wakho ngqo lo gama usenza asanas yoga elele phantsi ngomqolo, ekhukweni yoga kuluncedo kakhulu.Ukuba bedidekile ufuna ukuba ukhuko yoga okanye ukhuko kufuneka uthenge, sibe isisombululo kuwe. Nazi ezinye zezizathu zokuba kufuneka ube mnye, iintlobo amakhuko yoga kunye ezona zilungileyo kufuneka sithathe: -
Kutheni yoga mat kulungile kuwe?
A yoga mat kukunika indawo yakho yoga lobuqu. Ukuba benza yoga epakini yoluntu, belinganisa isithuba lwakho ngoncedo ukhuko kuthintela abazali oluntu kuloo mmandla kwaye ungenza yoga ngaphandle nokuphazamiseka.
Yenziwe le nto anti-skid. Ngaloo ndlela, uya kuthintela ukuba ekuweleni ngenxa ukubila ikhokela ku iingozi ezincinane lo gama ukwenza asanas yoga
A yoga mat iya kusoloko kuba umhlobo wakho ngentsasa olunethayo. Ukuba ikhe yana ubusuku bonke kunye nengca utyani yakho zimanzi, esenza yoga bebasa yoga ezizodwa ziya kukuvumela okokuba uqhubeke yoga yakho ngaphandle manzi.
Iintlobo amakhuko yoga
Enamathelayo yoga ipiyano
Ezi ipiyano yoga anti-skid elungileyo kwabasaqalayo abangenazo ulawulo kakhulu lwemizimba yabo ngelixa esenza asanas yoga. Ewe okulungileyo kwabo ndibile kakhulu ukuze kuhexa.
Iindawo ezinika umdla yoga ipiyano
Ezi ukukhanya ubunzima kunye lula ngokusonga ukuze ukwazi niwele nawe naphi na apho ukuhamba. Noko ke, azikho ntle ukusetyenziswa yonke imihla.
irabha Natural yoga amakhuko
Kwabo bafuna ukunciphisa ngegalelo labo ungcoliseko lokusingqongileyo, ezi amakhuko yoga igqibelele. Ekubeni zenziwe izithako zemvelo, ezi amakhuko zikhuselekile ukuba abantu babe ulusu onovakalelo.
Le ipiyano yemveli yoga esetyenziswayo ukuba zenziwe jute ngenxa ingxenye eyinhloko zendalo. Abayi ixesha elide kangaka kodwa liya kuba ukhetho olungileyo xa ufuna Kukwayidlela egaxabisi kakhulu
Ezi zenziwa obukhulu yomqhaphu ilaphu yaye kulungile labo bayathanda ukuba ahlambe impahla zabo ngoku qho emva koko. Kananjalo Kukwayidlela egaxabisi kakhulu ukuba ingqalelo.
ixesha Post: Oct-24-2018